Shiinaha TNCF4-taxane 3IN INC Mashiinka Mashiinka Mashiinka Quudinta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Daya
1. Isku dheelitirka dheelitirku waxay qaadataa akhriska mitirka elektaroonigga ah ee elektiroonigga ah;
2. Feejignaanta saxda ah ee sarreysa waxaa wada laba dhinac oo togan oo taban iyo taban si loo xakameeyo hagaajinta ballaca;
3. Dhererka xariiqda quudinta waxaa lagu hagaajiyaa wiishka mootada lagu wado;
4. Labo ka mid ah aaladda wax lagu xiro ee duuban ayaa loo isticmaalaa xaashida walxaha;
5. Rullaluistemadka Quudinta iyo rullaluistemadka sixitaanka waxay ka samaysan yihiin bir qaali ah oo qaata (daaweyn adag oo daweynta chromium);
6. Qalabka gacanta ku cadaadinaya Haydarooliga;
7. Mashiinka marshoku wuxuu wadaa aaladda madaxa quudinta ee shaagagga riixaya;
8. Qalabka madaxa ee quudinta otomaatigga ah;
9. Qalabka madaxa ee Haydarooliga;
10. Nidaamka quudinta waxaa gacanta ku haya barnaamijka Mitsubishi PLC;
11. Saxsanaanta quudinta waxaa gacanta ku haya Yaskawa servo mootada iyo yareynta adeegaha sare ee aduunka;
Horumarka joogtada ah ee teknolojiyadda awgood, qalabka feerka iyo qalabka durugsan ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Codsiga qalabka durugsan ee feerku wuxuu hagaajin karaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka wuxuuna yareeyn karaa kharashka shaqada, sidaa darteed waxaa doorbidaya soo-saarayaasha. Qalabka durugsan ee feerku wuxuu leeyahay qaybiyaha quudinta, qalabka wax lagu duubo, mashiinka toosinta, laba mid ka mid ah mashiinka toosinta, saddex ka mid ah qalabka wax lagu quudiyo qalabka wax lagu saxo. Maanta waxaan si kooban u soo bandhigi doonaa sedexda hal nidaam quudin.
1 Meel kaydi
Khadadka waxsoosaarka shaabadaysan waxaa ka mid ah qalabka wax lagu duubo, mashiinka dheellitirka ah iyo mashiinka quudinta. Saddexdaas mashiin hadday madaxbannaan yihiin, mugga mashiin kasta ma yara. Intaa waxaa sii dheer, si loo hubiyo wax soo saarka caadiga ah, waa inuu jiraa meel sugitaan qalab ah oo u dhexeeya mashiinka iyo mashiinka. Sidaa darteed, aagga sagxadda qadka wax soo saarka waa la qiyaasi karaa. Guud ahaan, wax yar ayaa hadhay ka dib marka qalabka la xidho, taas oo ka dhigaysa mid aan dhib ku ahayn hawl wadeennada inay ku socdaan Dheefta. Saddexda hal feeder ayaa isku daraya saddexda mashiin mid. Fuselage waa mid is haysta, aagga sagxaduna uu hoos u dhacay in ka badan kala badh marka la barbar dhigo xariiqda wax soo saarka shaabbada madaxbannaan ee madaxbannaan, si goobta aqoon isweydaarsiga si buuxda looga faa'iideysto, hawl wadeenaduna ay sidoo kale u helaan meel ku filan oo hawlgal ah, taas oo aan u horseedi doonin raaxo la'aan hawlgalka iyo kor u qaadida badbaadada wax soo saarka shaambada.
2 Kaydinta xoog iyo awood shaqo oo sarreysa
Saddexda hal feeder kaliya waxay u baahan yihiin hal qof si uu u dhammaystiro quudinta, quudinta, sawir qaadista, hagaajinta, baaritaanka caaryada iyo howlaha kale, waqtiga la qaatayna ma badna. Si kastaba ha noqotee, nooca gaarka ah ee madaxbannaan iyo midka madaxbannaan wuxuu u baahan yahay qayb kasta in lagu qalabeeyo hal qof, mararka qaarkoodna loo baahan yahay in midba midka kale ka caawiyo dhammaystirka hawlgalka, taas oo aan ku habboonayn badbaadinta xoogga iyo hagaajinta awoodda shaqada.
3 Hawl fudud iyo saxnaan sare
Saddexda hal feeder ayaa korsada nidaamka kumbuyuutarka. Hawlgalka shaqadu wuxuu gabi ahaanba ku urursan yahay qalabka iyo kontoroolka xakamaynta. Hal qof ayaa si fudud u dhameystiri kara qalliinka, kaas oo aad u dadnimo badan. Saddexda hal feedhi ayaa si aan macquul ahayn u dejin kara dhererka quudinta, simi karaya dhamaadka hore ee gariiradda si ay ugu fududaato xogta si ay u gasho rullaluistemadka, mootaduna waxay wadaa qalabka gacanta oo riixaya si looga ilaaliyo in gariiradu ay dabcaan. Mashiinnada toosinta iyo quudinta waxay ku yaalliin isla raashka, mana jiro kala-goyn u dhexeeya saldhigyada, taasoo aasaasiyan xaqiijineysa iswaafajinta shaqadooda. Waxay yareyn kartaa khaladaadka quudinta iyo hagaajinta, waxayna gaari kartaa codsiga saxsanaanta sare, ee aamin iyo xasiloon.
4 Dadaal heer sare ah iyo ku-xirnaan ballaaran
Saddexda isku mid ayaa leh qaab dhismeed is haysta, kaas oo ku habboon qorshaha wax soo saarka hindisaha sare iyo iskaashiga. Laga soo bilaabo rarka, daboolida ilaa heerka iyo quudinta, nidaamyo dhowr ah ayaa lagu dhammeeyaa daqiiqado yar hal qof. Way fududahay in la shaqeeyo oo aad u firfircoon. Waxay ku habboon tahay shaambada joogtada ah ee biraha kala duwan, shaabad, elektaroonig, qalabka korontada, alaabta lagu ciyaaro iyo qaybaha gawaarida.
5 Heerka fashilka oo hooseeya iyo cimri dherer
Saddex ka mid ah quudiyaha ayaa leh heer guuldarro oo hooseysa iyo nolol adeeg dheer
Hore: TNCF3-taxane 3IN INC Mashiinka Quudinta Servo
Xiga: TNCF5-taxane 3IN INC Mashiinka Quudinta Servo
TNCF5-taxane 3IN INC Mashiinka Quudinta Servo
JNCF-taxane-3IN 1NC Howlsocodsiinta Mashiinka Mashiinka
TNCF6-taxane 3IN INC Mashiinka Quudinta Servo
TNCF7-taxane 3IN INC Mashiinka Quudinta Servo